ရှင်ဂျန်းမှာ ကြောင်သား၊ ခွေးသားမစားရ
2 เม.ย. 2563 - 22:53 น.
ရှင်ဂျန်းပြည်နယ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကြောင်သား၊ ခွေးသားမစားရ တားမြစ်မိန့်ထုတ်တဲ့ ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာပါပြီ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သားတွေကို စားသုံးမှုနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်ဖြစ်လာပြီးနောက်မှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု၊ စားသုံးမှုမလုပ်ရလို့ တရုတ်အစိုးရက တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အာရှတလွှားမှာ တနှစ်ကိုခွေးပေါင်းသန်း ၃၀ သတ်ဖြတ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာကရုဏာလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ခွေးသားစားတဲ့အလေ့အထဟာ အများဓလေ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်အများစုက တခါမှ မစားဖူးသလို စားချင်စိတ်လည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။
“ခွေးနဲ့ကြောင်ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး တခြားတိရစ္ဆာန်တွေထက် လူနဲ့ပိုနီးစပ်ပါတယ်။ ခွေးသား၊ ကြောင်သားနဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် စားသုံးမှု တားမြစ်တာဟာ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ပြုနေကျ ကျင့်ထုံးဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်မှာလည်း အလားတူကျင့်သုံးတယ်”လို့ ရှင်ဂျန်းအစိုးရက ပြောကြောင်း ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တောင်းဆိုချက်လိုလားချက်ကို တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ အခုလိုတားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်တာလို့ ရှင်ဂျန်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။
တိရစ္ဆာန် အကျိုးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ HSI ကအခုဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်ခွေး ၁၀ သန်း ကြောင် ၄ သန်းကို ရက်ရက်စက် ရောင်းဝယ် သတ်ဖြတ်နေတာကို အဆုံးသတ်ရေး အတွက် ဒါဟာ အရေးပါတဲ့ တိုးတက်မှုတရပ်ပါလို့ HSI ရဲ့ မူဝါဒကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာပီတာလီက ဆိုပါတယ်။
ဒီဥပဒေထုတ်ပြန်ပေမယ့် ဝက်ဝံသည်းခြေရည်ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသတဲ့ တိုင်းရင်းဆေး အဖြစ်အသုံးပြုနေတာကိုတော့ ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းဆေးမှာ ဝက်ဝံသည်းခြေရည် အသုံးပြုတာဟာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက အစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ဝံသည်းခြေရည်ကို သည်းခြေပြွန်ကျောက်တည်ရောဂါနဲ့ အသည်းရောဂါတွေ အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသပျောက်ကင်းကြောင်းတော့ အထောက်အထားမရှိပါဘူး။
အာရှတိရစ္ဆာန်များဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဘရိုင်ယန်ဒါလိုင်းကတော့ တောရိုင်းသတ္တဝါတွေဆီက မြစ်ဖျားခံလာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အခုလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသဖို့တွက် ဝက်ဝံသည်းခြေရည်လိုမျိုး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုတာဟာ မသင့်တော်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရက တောကောင်ရောင်းဝယ်စားသုံးမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တောကောင်သားရောင်းချတဲ့ ဝူဟန်စျေးဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သစ် စတင်ရာနေရာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောဆို ယူဆလာပြီးနောက်မှာ တောကောင် ရောင်းဝယ်စားသုံးမှုကို ပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာတာဟာ တောကောင်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ တောကောင်စျေးကွက်ကို ထိထိရောက်ရောက်ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ဖို့ တရုတ်အစိုးရကို ဖိအားပေးလိုက်သလိုရှိပါတယ်။
ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ စာရင်းအရ အခုအခါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုရိုနာ ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၁ သန်းနီးပါးရှိပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၄၇၀၀၀ ကျော်သွားပါပြီ။
တရုတ်တနိုင်ငံတည်းမှာတွင် ကူးစက်သူစုစုပေါင်း ၈၁၅၈၉ နဲ့ သေဆုံးသူ ၃၃၁၈ ရှိတယ်လို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ဆိုပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အမှန်တကယ်ဘယ်ကစပြီး လူကို ဘယ်လိုစတင်ကူးစက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ သုတေသီတွေကိုယ်တိုင် ရှာဖွေအတည်ပြုနိုင်ဖို့ကတော့ အလှမ်းကွာဝေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရှင်ဂျန်းမှာ ကြောင်သား၊ ခွေးသားမစားရ